Filtrer les éléments par date : samedi, 04 mai 2019
samedi, 04 mai 2019 14:59
Alzeria: Voasambotra ny rahalahin'i Bouteflika
Ahiana hiketrika fanonganam-panjakana, fanohitohinana ny fandriam-pahalemana anatiny, izany no vesatra nisamborana an'i Saïd Bouteflika, rahalahin'i filoha alzerianina nametram-pialana Abdelaziz Bouteflika.
Niara-nivory tamina Jeneraly roa hafa efa misotro ronono izy, ka nosamborina ihany koa ireo jeneraly ireo.
Ny jenaraly Athmane Tartag, dit Bachir, dia jeneraly akaiky ny filoha teo aloha nisahana ny fiarovana anatiny, ity rahalahiny Saïd Bouteflika kosa no tena nitondra an'i Alzeria satria ny filoha dia efa narary efa ela, ny jeneraly Mohamed Mediène dit Toufik kosa dia lehiben'ny sampam-pitsikolovana alzerianina teo aloha.
samedi, 04 mai 2019 14:37
Korea avaratra: Nandefa misila teo ambony faridranomasina Japon i Kim Jong-Un io maraina io
Vao maraina tokony tamin'ny 9ora tany an-toerana, dia nandefa misila tsy mahataka-davitra maromaro nihazo ny faridranomasin'i Japon ny filohan'i Korea avaratra, Kim Jong-Un.
Nahatratra 70 ka hatramin'ny 200km teo ambonin'ny ranomasin'i Japon ireto misila ireto.
Ny sampam-pitsokilovan'i Korea atsimo moa no nahita izao misila izao, ary nilaza ihany koa i Etats-Unis fa nahita ilay misila nirefotra.
Mihamihenjana arak'izany ity raharaha fanerena an'i Korea Avaratra hiala amin'ny fikarohana ara-pitaovampiadiana nokleary ity, raha nandamoaka ny fihaonana fanindroany, tany Hanoï Vietnam teo amin'ny Filoha roa tonta, Kim Jong-Un sy Donald Trump.
Ary efa nisy ihany koa fifanantonana nifanaovan'i Kim Jong-Un sy Vladmir Poutine filoha rosianina, izay nifanolorana sabatra ho fanamarihana ny fanambarana ny hery eo amin'ny roa tonta.
samedi, 04 mai 2019 13:07
Floride Etats-Unis: Niafara tany anaty rano ilay fiaramanidina Boeing 737, tsy nisy maty
Niainga tao amin'ny foiben-toeran'ny miaramila amerikanina Guentanamo any Cuba ity Boeing 737, nitondra mpandeha 136 ary mpanamory 7 ny zoma alina ny 3 mey 2019, hiazo an'i Floride Etats-Unis.
Tratran'ny andro ratsy anefa izy teo ampidinana ny seranam-piaramanidina miaramila tao Jacksonville Floride, ka niantoraka havia havana ny fiaramanidina nandritra ny fiantsonana, ary niafara tao anaty rano manamorona ny seranana.
Tsy nisy ny aina nafoy, nisy kosa ny maratra, ary avy dia nentina notsaboina teo akaiky teo ihany.
samedi, 04 mai 2019 12:56
Fifidianana depiote: Hatolotra etsy Ambohijatovo anio ireo kandidan’ny TIM-K25
Ho ambohimpihaonan’ny Tiako I Madagasikara-K25 eo amin’ny Kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo – Antananarivo anio. Hampahafantarina sy entina am-bavaka mandritra ny hetsika hotanterahina eny an-toerana ireo kandida solombavambahoaka narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM)- K25.
Nahazo alalana tamin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny hampiasana ny toerana, nahazo alalana avy amin'ny Prefektioran’Antananarivo ihany koa ny fanatanterahana ny hetsika.
Miisa 109 ny kandidan’ity antoko tarihin’i Marc Ravalomanana, filoham-pirenena teo aloha ity, manerana ny Nosy.
Hisokatra amin’ny alatsinainy 6 mey 2019 izao ny fampielezan-kevitra izay haharitra 21 andro, hifarana ny 25 mey 2019 misasak’alina. Ny alatsinainy 27 mey 2019 no tanterahina manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny latsabato.
samedi, 04 mai 2019 12:53
FIFAMANOR: Voatendry ho Tale Rakotomalala Holiarison William
Rakotomalala Holiarison William no Tale vaovaon’ny FIFAMANOR (Fiompiana Fambolena Malagasy Norveziana) ao Andranomanelatra – Antsirabe. Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana fanendrena azy araka ny tolokevitry ny minisitry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono.
Tale teo anivon’ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono Rakotomalala Holiarison William talohan’izao fanendrena azy ao amin’ny FIFAMANOR izao.
Mandalo fahasahiranana ny FIFAMANOR, roa volana (martsa, aprily) tsy nandray karama izao ny mpiasa.
Tale mpisolo toerana no mitantana ny FIFAMANOR hatramin’ny fiandohan’ity taona ity rehefa lasa nisotro ronono ny Tale teo taloha.
samedi, 04 mai 2019 12:48
Fitsapankevi-bahoaka: Nofoanana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana laharana faha-2019-790 tamin’ny 19 aprily 2019 miantso ny mpifidy handray anjara amin’ny fitsapankevi-bahoaka entina manova ny andininy sasantsasany amin’ny Lalampanorenan’ny Repoblika fahaefatra sy ny didim-panjakana laharana faha 2049-791 tamin’ny 19 aprily 2019 mamaritra ny rijan-teny nentina nanova ny Lalampanorenana sy ny rijam-panontaniana hapetraka amin’ny mpifidy amin’ny fitsapankevi-bahoaka ny 27 mey 2019.
samedi, 04 mai 2019 11:06
OMNIS: Voatendry ho filohan'ny Filankevi-pitantanana i Delmotte Stéphanie
Talen'ny kabinetran'ny Fiadidiana ny Repoblika, amperinasa, i Delmotte Stéphanie, izy no notendrena ho filohan'ny Filankevi-pitantanan'ny OMNIS (Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques) izao.
samedi, 04 mai 2019 10:58
Raharaha « Base Toliara »: Nametraka sakana tamin’ny RN9 ny andian’olona tsy faly
Tapaka ny lalana ao Benetse, Kaominina Ankilimalinika, omaly hariva, noho ny fitokonana nataon'ireo andian’olona maromaro manohitra ny fitrandrahana fasimainty hataon’ny orinasa “Base Toliara”.
Vao maika nampitroatra azy ireo ny nisamboran’ny mpitandro ny filaminana nitondra kamiao sy 4x4 ireo lohandohany mitarika io fanoherana ny fasimainty io.
Nisy ny fifanandrinana. Nirefotra ny baomba mandatsa-dranomaso fa tsy nohemotra ireo mpanao fihetsiketsehana. Nametraka sakana tamin’ny lalam-pirenena faha-9 ireto farany ary dia tapaka nandritra ny fotoana vitsy ny fifamoivoizana.
samedi, 04 mai 2019 10:52
Fifidianana depiote: Mifamadika ny laharan'ny kandida amin’ny “spécimen” tonga aty Manja
Tsy mifanaraka amin’ny laharana tamin’ny antsapaka ny zavatra voarakitra amin’ny biletà tokana “spécimen” nozaraina amin’ireo kandida solombavambahoaka ato amin’ny Distrikan’i Manja.
Efatra ny kandida ato Manja, nifamadika ny filaharana satria lasa laharana 1 ny tokony ho 4.
samedi, 04 mai 2019 10:50
Fifidianana Solombavambahoaka: Miisa 25 365 ireo birao fandatsaham-bato manerana ny Nosy
Ny fanapahana laharana faha-32/CENI/2019 tamin’ny 27 martsa 2019 no nametraka ny isan’ny birao fandatsaham-bato ho 25 365 mandritra ny fifidianana Solombavambahoaka izay hotanterahina ny alatsinainy 27 mey ho avy izao.
Nitombo 513 ny isan’ny birao fandatsaham-bato raha oharina tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena tamin’ny taon-dasa. Mety mbola hiova ny isan’ireo birao fandatsaham-bato ireo raha misy ny antony tsy azo anoharana, 48 ora farafahatarany, mialohan’ny andron’ny fifidianana.
Feran’ny lalàna ho 700 ny isan’ny mpifidy ao amin’ny birao fandatsaham-bato iray.